Kitaab - Wikipedia
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka.
Bogag ka mid ah kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka.
Kitaab Kutub (ingiriis: book, kitab; carabi: ﮐﺘﺎﺏ, "kitaab"; wadar: ﮐﺘﺏ, loogu dhawaaqo "kutub"; Giriig: κιτάπι, loogu dhawaaqo: "kitabi"; Kiswahili: kitabu; af-Hindi, af-Faarsi, Urdu, Af-Turki: "kitap"; Hebrew: מך, "kethav") waa erey af-Carabi ah oo macnaheedu tahay "buug". Intaasi waxaa dheer ereyga "kitaab" waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo kutubta afarta ah iyo suxufiga Ilaahay (s.w) ku soo dejiyay ama u soo waxyooday Rasuusha iyo Nebiyada. Sidoo kale, marka la soo qaado ereyga Al-Kitaab waxaa loola dan leeyahay ama la sheegayaa oo loo adeegsadaa kitaabka Quraanka ah ee saldhiga u ah diinta Islaamka.
Wuxuu ku qoran yahay luuqada carabigabani Israa'iil, iyo farta Hebrewga.
↑ "Kitaab Kutub (ingiriis: book, kitab; carabi: ﮐﺘﺎﺏ, "kitaab"; wadar: ﮐﺘﺏ, loogu dhawaaqo "kutub""
↑ "Giriig: κιτάπι, loogu dhawaaqo: "kitabi"; Kiswahili: kitabu; af-Hindi, af-Faarsi, Urdu, Af-Turki: "kitap"; Hebrew: מך, "kethav"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitaab&oldid=200660"
Last edited on 6 May 2020, at 05:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 May 2020, marka ee eheed 05:14.